अल्ट्रासोनिकेसन र नवीकरणीय ईन्धन - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
जैव ईण्ड्सेल, जैवथानोल र बायोग्राहरू तीनवटा तरिका हुन् जसले कार्बनिक सामग्रीलाई हरी ईंन्धनहरूमा परिणत गर्दछ। अल्ट्रासोनिकेशनले ऊर्जा उपज र रूपान्तरण क्षमतालाई सुधार गर्छ।
नवीकरणीय ईंधनहरू बढ्दो मागको आनन्द उठाउँछन् किनभने तेलको मूल्यहरूले नयाँ ऊँची हतियारको चिह्न लगाउँछन्। अल्ट्रासोनिक टेक्नोलोजी को लागी हरी ईंन्धन, जस्तै biodiesel, bioethanol र biogas उत्पादन को लागी प्रौद्योगिकी र व्यावसायिक क्षमता मा सुधार।
वनस्पति तेल र पशु फैटबाट बायोडाइडल
बायोडिडेल एक अक्षय ईन्धन हो जसले पेट्रोलियमबाट बने डीजल ईन्टरनेसनको लागि डीजल इन्जिनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। Biodiesel स्रोतहरु देखि ट्रांजिस्टरेशन द्वारा बनाइन्छ, जस्तै सब्जी को तेल, पशु वसा या तेल। प्राय: साधारण हो फूड स्ट्याकहरू जस्तै सोयाबीन, रेपिसेज वा अल्गा तेल। बायोडाइडल को निर्माणमा शराब (मेथनोल वा इथेनॉल) संग उत्प्रेरक प्रतिक्रिया समावेश छ। तेल को अल्ट्रासोनिक मिश्रण, रक्सी संग वसा या तेल प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया को गति मा सुधार र काफी उपज। यसले लगानी र परिचालन लागत घटाउँछ।
Biodiesel को लागि अल्ट्रासोनिक मिक्सिङ रिएक्टरहरूको बारेमा थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
स्टार्च र शुगरबाट बायोथेनल
जैियोथोलोल पेट्रोलको हरियो विकल्पको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। यो किण्वन, मकै, आलु, शंकु बनी, चावल र किण्वनबाट अन्य अन्नबाट बनाइएको छ। खमीरमा यी फसलहरूमा इथेनोलमा पाइने स्टार्च र शंकुहरू किन्न प्रयोग गरिन्छ। अल्ट्रासोनिक विस्थापन सेल्युलर संरचनाहरु र इंट्रासेलुलर सामाग्री को निकालन कण आकार को कम गर्दछ र तरल पदार्थ को समयमा एंजाइमहरु लाई एकदम ठूलो सतह को क्षेत्र को उजागर गर्दछ। यसले स्टार्च र चिनियाँको bioavailability सुधार गर्दछ र छिटो र अधिक पूर्ण किण्वनमा परिणाम इथेनॉलको लागि अग्रणी।
थप पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् कक्ष विच्छेद र निकासी!
अपशिष्ट र चिसोबाट बायोग्रा
नगरपालिका कार्बनिक अपशिष्ट, सीवेज हजुर, मग र खाडी बायोग्राको स्रोतको रूपमा कार्य गर्दछ। एरोबिक वा एनाबोबिक डाइजेस्टर्सहरूमा यस्तो सामग्रीको प्रशोधन कार्बनिक सामग्री बायोगेसमा बदल्छ। अल्ट्रासोनिक कार्बनिक सामाग्री को विघटन पाचन भन्दा पहिले भौतिक ढाँचामा उडाउँछ, र रिलीज र एंजाइमहरू सक्रिय गर्दछ। यसले छिटो प्रसोधन, अधिक ग्याँस र कम अवशिष्ट कुंडलीको लागी कार्बनिक सामग्री को पाचन बढाउँछ। यसले बारीमा अवस्थित डाइजेस्टरहरूको क्षमता बढाउँछ र निपटान लागत घटाउँछ।
थप पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अल्ट्रासोनिक स्लड विघटन!
अल्ट्रासोनिक ऊर्जा ब्यालेन्स
माथि उल्लेख गरिएको प्रसोधित अल्ट्रासोनिक ऊर्जाको आवश्यकता पर्दैन। सामान्यतया अप्प्लस ऊर्जाको परिणामस्वरूप sonication अल्ट्रासाउन्ड उत्पन्न गर्न प्रयोग गरिने ऊर्जाको लागि बनाउँछ। Hielscher अल्ट्रासोनिक उपकरणहरु सँग एक समग्र छ 85% भन्दा अधिक दक्षता। यसको अर्थ भनेको विद्युतीय ऊर्जा को 85% भन्दा बढी परिवर्तित हो र यांत्रिक ऊर्जा को माध्यम ले तरल को डेलिभर गरिन्छ। एक प्रक्रिया को वास्तविक ऊर्जा आवश्यकता बेंच - शीर्ष मापन मा 1kW अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर को उपयोग गरेर साना पैमाने मा निर्धारित गर्न सकिन्छ। यस्तो बेंच-शीर्ष परीक्षणहरूको सबै परिणाम हुन सक्छ सजिलै उचाइयो। Hielscher आपूर्ति औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रसंस्करण उपकरण, दुनिया भर मा। माथिको अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरूसँग 16kW पावर प्रति एकल उपकरण, त्यहाँ पौधेको आकार वा प्रसोधन क्षमतामा कुनै सीमा छैन।
कृपया तल फारम प्रयोग गर्नुहोस् यदि तपाई अल्ट्रासाउन्डको अक्षरेज इन्धनको उत्पादनमा थप जानकारी अनुरोध गर्न चाहानुहुन्छ।